China Polyethylene Glycol 6000 Peg6000 fekitori uye vagadziri | Yinuoxin
Polyethylene glycol 6000 inogadzirirwa nepolimerization yemvura ethylene glycol pakudziya kwepamusoro, kumanikidza zvakanyanya kana kumanikidza kwakaderera.
Polyethylene glycol 6000 (PEG-6000) Chirungu Zita: macrogol 6000-992 ichi chigadzirwa musanganiswa weethylene oxide uye mvura polycondensation, iyo molekyura fomula ndeye ho (CH2CH2O) NH, uko n inomiririra avhareji nhamba ye oxyvinyls.
Ichi chigadzirwa chena waxy solid flake kana granular upfu, zvishoma zvinonhuwirira. Chigadzirwa chinonyungudika mumvura kana ethanol, asi chisingasviki mune ether. Iyo inotonhora poindi yechigadzirwa ichi (Appendikisi VI d) iri 53 ~ 58 ℃. Viscosity tora 25.0g yeichi chigadzirwa, chiise mubhodhoro rekuyera 100ml, wedzera mvura kuti inyungudike uye isanganise pachiyero, zunza mushe, shandisa Pinker viscometer ine dhayamita yemukati ye1.0mm kuona maererano nemutemo (Appendikisi VI g nzira 1 ). Iyo kinematic viscosity pa40 ℃ ndeye 10.5-16.5mm <2> / s.
Iyo ine kutsamwa kudiki kune ganda nemeso, uye zvinonetsa kupinza nemudumbu wemudumbu mushure mekutungamira kwemuromo, uye huturu hwakadzika kwazvo. Jekiseni re5% (mashoma) aqueous solution ye polyethylene oxide mumaziso etsuro yakakonzera kutsva kudiki. PEO yaive nemhedzisiro shoma pahuwandu hwekufa kwehove, crab, Anemone, shrimp kana algae. Iyo resin uye aqueous mhinduro yakaderera chepfu, uye yakachengeteka kushandisa nekubata. US Food and Drug Administration (FDA) yakabvumidza kushandiswa kwepolyethylene oxide aqueous solution resin yezvakakosha zvekurongedza chikafu uye doro zvakanangana zvinowedzerwa.
Ivhareji yemorekuru uremu hwechigadzirwa ichi ingangoita 12.5g, inoyerwa nenzira kwayo. Isa iri mune 250ml conical flask ine chimiso, wedzera 25ml pyridine, ipise kuti uinyungudise, uye itonhorere pasi. Zvinoenderana neiyo nzira ye polyethylene glycol 400, kutanga kubva pa "pyridine solution yakawedzerwa ne phthalic anhydride chaizvo" Iyo acidity, kujeka uye ruvara rwemhinduro, uye zvisaririra pakutsva zvichaongororwa maererano nenzira yakatsanangurwa mu polyethylene glycol 400.
Chitarisiko （25 ℃）
Zvemukati zvemvura （%）
1% Aqueous mhinduro）
Milky White yakasimba
Mashoko: kambani yedu inopawo dzakasiyana mhando dzeEGEG zvigadzirwa.
Pashure: Polyethylene Glycol 4000 Peg4000
Zvadaro: Polyethylene Glycol 8000 Peg 8000
Jiaoyisan Pr-85 Yekuwedzera Inoparadzira Series
Mould Yijie R-99 Yemukati Yekuwedzera Mould Kuburitswa ...